Soo dejisan Psiphon 3.161 – Windows – Vessoft
WindowsShabakadVPN iyo WakiilPsiphon
Bogga rasmiga ah: Psiphon
Psiphon – software loogu talagalay in lagu gab faafreeb internet-ka. Software waxa uu isticmaalaa teknoolajiyada wakiil oo kala duwan si ay u bixiyaan helaan si ay ugu websites hor istaagay. Psiphon rakibtay si toos ah goobaha nidaamka wakiil kuwaasi oo loo isticmaalo dambeysta ah adigoo u daalacashada casriga ah. Software ayaa sidoo kale dadka ka difaacaa xatooyo ee sirta ah ama cillad xisaabaadka inta ee internet-ka. Psiphon leeyahay interface sahlan oo dareen leh.
Disables faafreeb internet
Taageerada technology wakiil kala duwan
Ilaalinta xadista ee sirta ah ama jabsiga xisaabaadka
English, العربية, አማርኛ, Українська...
Faallo ku saabsan Psiphon
Psiphon Xirfadaha la xiriira